सिंहदरवारभित्र मन्त्रीकै कार्यकक्षमा कुटिए स्वकीय सचिव ! - Everest Dainik - News from Nepal
सिंहदरवारभित्र मन्त्रीकै कार्यकक्षमा कुटिए स्वकीय सचिव !
काठमाडौं, भदौ २७ । मन्त्रीलाई भेटन नदिएको भन्दै सिंहदरवारभित्र मन्त्रीकै कार्यकक्षमा मन्त्रीको स्वकीय सचिवले निर्घात कुटार्इ खाएका छन । लामो समयसम्म कुर्दा पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई भेट्न समय नमिलाइदिएको भन्दै मन्त्रीका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुले नै कुटपिट गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस सिंहदरबार प्रवेशमा थप कडाई
स्वकीय सचिव विष्टले मन्त्रीज्यू व्यस्त रहेको भन्दै ती कार्यकर्तालाई अलमल्याउन खोजेका थिए । लामो समय कुर्दा पनि समय नपाएपछि भेट्ने पालो कुरेर बसेका कार्यकर्ताहरुले आफ्नै पार्टीको मन्त्रीलाई पनि भेट्न नपाउने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै कुटपिट गरेको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
याे पनि पढ्नुस प्रदेश सांसदलाई नासु तहको स्वकीय सचिव
। ती प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार साँझ ६ बजेसम्म पनि भेट्न पाउने÷नपाउने विषयमा भनाभन भएपछि दुई जना कार्यकर्ताले स्वकीय सचिव विष्टमाथि कुटपिट गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
ट्याग्स: Kutiye, Sighdarbar, स्वकीय सचिव